आर्यनले फेरी गरे बिहे ! « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
आर्यनले फेरी गरे बिहे !
हुनत अभिनेता आर्यन सिग्देलले करिब डेढ बर्ष अघि सपना भण्डारीसँग रियल लाइफमै बिहे गरिसकेका छन् तर फेरी आर्यनले आशिका तमाङसँग बिहे गरेपछि भने यसको चर्चा व्यापक बनेको छ । तर आर्यनले आशिकासँग रियल लाइफमा भने बिहे गरेका होइनन् ।
उनले कात्तिक ३ गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउन लागेको कमेडी चलचित्र सुश्रीमा बिहे गरेका हुन् । चलचित्रको पर्दामा आशिकासँग बिहे गर्दै गरेको भिडियो तथा तस्विर यति बेला भाइरल बनिरहेको छ । केहि दिन अगाडी चलचित्र यूनिटले सार्वजनिक गरेको चलचित्रको ट्रेलरमा पनि आर्यनले बिहे गरेको देख्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक ट्रेलरमा आर्यन अर्की हिरोइन सुरबिना कार्कीसँग बिहे मण्डपमा हुदै गर्दा डेब्यु हिरोइन आशिका तमाङले नै आर्यनलाई भगाएकी छिन् । अभिनेता आर्यन सिग्देल स्टारर यस चलचित्रको गीत र ट्रेलर पछिल्लो समय दर्शकले निकै रुचाएका छन् । चलचित्र लेखक शिबम अधिकारी निर्देशित चलचित्रमा आर्यन र आशिका सहित सुरबिना कार्की, बिकास चापागाईं, राजाराम पौडेल, मिश्री थापा लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
आशिका फिल्म्सको ब्यानरमा निर्मित चलचित्रलाई आत्माराम थापाले निर्माण गरेका हुन् ।